Netizen Report: Manjohy ny Làlan’i Rosia i Shina, Mitàna Ireo Angon-drakitr’ireo Mpampiasa Ho Eo An-tànan’ny Governemanta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Oktobra 2015 5:06 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Español, Magyar, Italiano, English
Nialoha ny fihaonana teo amin'i Lu Wei, ny mpanjakan'ny Aterineton'i Shina, sy ireo orinasa Amerikana maro momba ny teknolojia, ahitàna ny Apple, Cisco, Facebook, Google, IBM, Microsoft, ary Uber — namoaka taratasy ny Human Rights Watch nangataka ireo orinasa nasaina mba hanaiky ampahibemaso “tsy hamela ny fanararaotan'ny governemanta amin'ny fahalalahana miteny sy ny fiainana manokana any Shina.” Natao io ho tohin'ilay fangatahana lehibe nataon'ny Ivontoerana Famakafakàna ny Teknolojian'ny Fiarovana sy ny Fampitàm-baovao ao Shina, itakiana amin'ireo orinasa Amerikana mba handrakitra ny angon-drakitr'ireo mpampiasa Shinoa ao Shina, mba “tsy hanimba” ny fandriampahalemana nasiônaly, ary “mba hanome toky ny hanaiky ny fanarahamaso avy amin'ireo lafy rehetra ao amin'ny fiarahamonina.”
Tsy zava-baovao ireo fangatahan'i Shina ireo, fa mitatra kosa any amin'ny fangatahana lehibe mitombo hatrany ataon'ireo governemanta matanjaka, mangataka ireo orinasanà teknolojia any ivelany mba hampiasa ireo lalànany ary handrakitra ny angon-drakitr'ireo olom-pirenena mba ho mora azon'ireo manampahefana mifandraika amin'izany. Manomboka any Brezila ka hatrany India ka hatrany Vietnam, efa natolotra daholo ny politika sahala amin'izany, miovaova kosa ny taham-pahatanterahany. Fa miaraka amin'ireo teknolojia sy tanjaka ara-politikan'ireo ivontoerana sahala an'i Shina sy Rosia, izay mandroso mankany amin'io sehatra io koa, toa ho zavatra efa hihatra fa tsy fandrahonana fotsiny ilay fironana vaovao.
Mbola manjavozavo ny andinidnininy araka ny lalàna mikasika ilay tolo-dalàna ao Shina, fa toa mety hikiky ny dingana misy eo an-toerana ankehitriny izy ireo mba hangatahana ireo angon-drakitr'reo mpampiasa avy any amin'ireo orinasa mitoetra any Amerika. Ohatra, amin'izao, tokony mampiseho didim-pitsaràna any amin'ny Ministeran'ny Fitsaràna any Etazonia, izay hanamarina ny maha ara-drariny azy, izayy governemanta te-hahazo ireo angon-drakitry ny mpampiasa Google. Manazava ny taridàlan'ny fampiharana lalàna ho an‘i Google fa raha toa ka mety amin'ny lalànan'i Etazonia sy ireo politikan'i Google ilay fangatahana, ho tanterahana io. Raha tsy izay kosa, mijanona ho tsiambaratelo ny angon-drakitry ny mpampiasa. Mitovy amin'izany daholo ho an'ireo orinasa Amerikana rehetra manana raharaha any ivelany.
Ny Taona lasa, ny vokatra mifangaron'ireo fitsipiky ny Aterineto hentitra kokoa vaovao ireo, sady vaovao ankehitriny no efa voaomana, mandrisika an'ilay lehiben'ny Aterineto Rosiana, Anton Nossik, hanambara fa efa akaiky ny “faran‘” ireo tolotra media sosialy Amerikana sahala amin'ny Facebook, Twitter, sy Google, any Rosia. Tsy mbola niseho aloha izany hatreto, fa toa mampieritreritra hoe mety tsy ho ela intsony izany faminanian'i Nossik izany raha atao topimaso ny làlan'ireo firenena roa ireo.
Eo am-pamerenana ny fijerena ny volavolan-dalàna iray ny governemanta Indiana, volavolan-dalàna izay mety hanome fahafahana ireo manampahefana mifandraika amin'izany hiditra amin’ “ireo loharanom-baovao rehetra nafenina”, na avy aiza io na inona tanjony. Eo ankilany dia mafy tokoa ireo hevitra mafy manohitra ilay fandemena ny fanasiana fanafenana ataon'ireo mpiaro ny fiainana manokana, ny hatezeram-bahoaka manohitra ilay volavolan-dalàna noho ilay lalàna izay mitaky amin'ireo olon-tsotra hitazona an-tsoratra ireo media sosialy misy fanafenana rehetra sy ireo resadresaka amin'ny Aterineto — eo amin'ireo sehatra toy ny WhatsApp, Viber, sy Google Chat — 90 andro farafahakeliny, raha tsy izany mety ahiditra am-ponja. Nolavin'ireo mpampiasa finday manerana ny firenena tsy ankihambahamba io andrana handinganana ny teknolojian'ny fanasiana fanafenana io izay efa tafiditra ao amin'ireo sehatra ireo, ary nahatonga ny governemanta hisintona ilay volavolan-dalàna ho amin'ny fanapahana manaraka indray aloha.
Mety hanova ny lalàna famaizana ao amin'ny firenena ireo mpanao lalànan'i Pero, mba hahalasa heloka bevava ny hetsika manimba ny laza sy ny voninahitry ny olona hafa ao amin'ny media sosialy. Amin'ny fitanisàna ireo sehatra fiseraseràna, ahitàna ny Facebook sy Twitter, milaza ilay volavolan-dalàna fa hampidirina am-ponja mandritra ny 1 – 3 taona ireo mpanitsakitsaka izany.
Nodidian'ny Roskomnadzor, mpandrindra avy amin'ny governemanta Rosiana, ny tambajotra sosialy Vkontakte mba hanakatona ireo kaontin'ny Children-404 ary ireo vondrona hafa maro manohana ireo tanora LGBT ao amin'ny Aterineto, taorian'ny fanapahankevitry ny fitsaràna nilaza fa nandefa “fampielezan-kevitra sarimbavy” tsy ara-dalàna tamin'ny Aterineto ireo vondrona ireo. Nomena telo andro ireo vondrona ireo mba hanalàna ny votoaty tsy ara-dalàna, fa araka ilay mpanorina ny Children-404, Lena Klimova, tsy nomarihan'ireo tomponandraki-panjakana hoe inona ilay votoaty tsy manara-dalàna.
Eo am-pametrahana ny politikan'ny Aterineto izao i Iran, eo ambanin'ny fiahian'ilay sampana fatra-pitahiry ny nentin-drazana ao amin'ny governemanta, ny Filankevitra An-tampon'ny Sehatry ny Aterineto, izay mitatitra mivantana any amin'ilay Filoha An-tampony Ali Khamenei. Teo taloha, nilaza ny Filoha An-tampony fa “ampiasain'ireo fahavalo mikendry ny hanova ny fisainan'ireo Silamo” ny Aterineto. Manapaka ilay mba mpandanjalanja kokoa an'i Iran, ny Filoha Rouhani, amin'ny fametrahana politikan'ny Aterineto tokoa mantsy io fiovàna io, milaza fa toa ho lasa mankany amin'ny mahery fihetsika ireo fameperana ao Iràna.
Ny orinasam-piarovana ny seratseran'ny Aterineto, FireEye, nahita teknika 14 miasa any ambadika tamin'ireo “routeurs”-mbarotra namidy tany India, Meksika, Filipina, ary Okraina, taorian'ny nijirihana ireo “routeurs” ireo. Na naka ny fahefana ahafahana mandrindra ilay tambajotra ireo mpanafika na afaka niditra nikitika mivantana an'ireo “routeurs” ireo, mba haka ny fifehezana ireo “routeurs” ireo, izy rehetra ireo dia namboarin'ny Cisco. Ireo mpanafika dia afaka niditra tao amin'ny angon-drakitr'ireo orinasa sy ireo fikambanana ara-panjakana rehetra, izay mipetraka aorian'ilay “routeur”, araka ny Filoha Tale Jenaralin'ny FireEye, Dave DeWalt. Raha toa ka tratran'ireo rindrambaiko natao hamotika ireo “routeurs” tany an-trano fahiny, vitsy kosa ireo fanafihana ireo “routeurs”-mbarotra — araka an'i DeWalt, firenena vitsy monja no mahavita manao ny karazam-panafihana toy izany.
Nanao ny Sarintanin'ny Media sy ny Fanànana Media (fijerna hoe iza no tompony) ireo fikambanana maro manao fikarohana momba ny asa fanaovana gazety any Shily sy Kolombia, izay angon-drakitra iray ho an'ny fanànana media ahitàna loharanom-baovao momba ireo orinasanà media maherin'ny 700 isa, natao ho fitaovana fikarohana ho an'ireo mpanapa-kevitra politika, mpanao gazety, mpianatra sy vahoaka tsotra. Ampahan'ilay tetikasa angon-dakitry ny asa fanaovana gazety Poderopedia (“Power-opedia”) ilay sarintany, izay ahitàna ireo fahefana ara-politika sy an'ny vondron'orinasa ao amin'ny faritra.
Salama Daholo Ve Ireo Ankizy? Mety Misy Loza Ho an'ireo Zaza Tsy Ampy Taona Ilay “Application Smart Sheriff” an'i Korea Atsimo (lahatsoratra amin'ny teny Anglisy) – Citizen Lab
Nandray anjara tamin'ity tatitra ity i Juan Arellano, Mary Aviles, Ellery Roberts Biddle, Darina Gribova, Hae-in Lim sy Sarah Myers West.